Ogaden News Agency (ONA) – War Deg-deg ah – Birqod oo xalay weerar culus lagu qaaday
War Deg-deg ah – Birqod oo xalay weerar culus lagu qaaday
Posted by ONA Admin	/ August 12, 2012
Naftood-hurayaasha CWXO ayaa dagaal qorshyasan ku qaaday goobihii ay ugu talagaleen Cabdi iley iyo saraakiisha sirdoonka Itobiya inay ku qabtaan waxay ugu yeedheen shir maamul oo la doonayay in hab dacaayadeed loo adeegsado.
Wararka hordhaca ah ee Wakaaladda ONA ka soo gaadhay Xarunta Dhexe ee jabhadda wuxuu sheegayaa in goobtii ay ku xidheen makiinadaha dabka ugu horeyn uu weerarka ka bilowday si loo bakhtiiyo ka dibna weerar lagu ekeeyay goobtii laga qotomiyay teendhooyin loo dhisay dad la soo ururiyay oo la doonayay in sawirada laga qaado. Ilo-xog ogaal ah oo ku sugan goobta shirka ayaa noo sheegay in Cabdi iley iyo kooxdii la socotay loola cararay Xerada Wayaanaha ay ka dagan yihiin Birqod, halkaasoo kolkii dambena lagu qaaday weerar culus.
Waxaan noo suurtaglain ilaa hadda inaan soo ururino tafaasiisha khasaaraha ka soo gaadhay Gumaysiga iyo adeegayaashiisa weerarkii mirta ahaa ee xalay lagu basiyay, taasoo aan dib ka soo ururin doono, iyadoo dadka deegaanka oon la xidhiidhnay ay sheegayaan in dhibaato culus ay gaadhay.
CWXO ayaa Birqod iyo agagaarkeeda ku hareereysan, cadawgana waxaa la sheegayaa inuu birmad ka dalbaday goobo kala duwan.
Wixii ka soo cusboonaada saacadaha soo socda waan idinla socodsiin doonaa. Guusha Gobanimadoonkaa leh.